Kazakhstan oo xabsiga dhigtay madaxii hore ee sirdoonka oo lagu eedeeyay khiyaano qaran | Arrimaha Bulshada
Home News Kazakhstan oo xabsiga dhigtay madaxii hore ee sirdoonka oo lagu eedeeyay khiyaano qaran
Kazakhstan oo xabsiga dhigtay madaxii hore ee sirdoonka oo lagu eedeeyay khiyaano qaran
Bulsha:- Madaxii hore ee hay’adda sirdoonka gudaha ee Kazakhstan ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii looga shakiyay qiyaano qaran, sida ay wakaaladdu sheegtay Sabtidii, kadib markii shaqada laga eryay iyada oo ay socdeen dibadbaxyo rabshado wata.
Guddiga Amniga Qaranka, ama KNB, ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxii hore ee xisbiga Karim Masimov la xiray Khamiistii ka dib markii ay bilaabeen baaritaan ku saabsan eedeymaha qiyaano qaran.
“6-dii Janaayo ee sanadkan Guddiga Amniga Qaranka ayaa bilaabay baaritaan horudhac ah oo ku saabsan khiyaano qaran,” ayaa lagu yiri qoraalka. Isla maalintaas, iyadoo looga shakisan yahay inuu galay dambigan, guddoomiyihii hore ee KNB KK Masimov waa la xiray waxaana la dhigay xarun lagu hayo oo ku meel gaar ah, isaga iyo kuwa kale.”
Ciidamada ammaanka ayaa u muuqday inay dib u qabsadeen waddooyinka magaalada ugu weyn Kazakhstan ee Almaty Jimcihii ka dib maalmo rabshado ah.
Madaxweynaha uu Ruushka taageero Kassym-Jomart Tokayev ayaa sheegay in uu amar ku bixiyay in ciidamadiisa ay ” toogtaan dadka banaambaxaya si ay u dejiyaan kacdoonka dalka oo dhan.